सार्क सुरक्षामा भारत हाबी
अठारौं सार्क शिखर सम्मलेन नजिकिँदै गर्दा सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारेको छ । राजधानी भित्रिने नाका हुन् वा विमानस्थल क्षेत्रमा हुने सुरक्षा जाँचले विगतको द्वन्द्वकालको झल्को दिन्छ । राजधानी भित्रिने नाका थानकोटमा यात्रुहरूलाई बसबाट ओरालेर खानतलासी लिने गरिन्छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार, सार्कमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउने
क्रममा यसखाले जाँच दुई महिनादेखि गरिएको छ । भन्छन्, 'दसैं अघिदेखि नै सुरक्षा निकायहरूलाई सार्कलाई लक्षित गरेर सुरक्षाजाँच गर्ने, योजना बनाउने, परामर्श गर्ने जस्ता काममा परिचालन गरिएको छ ।'
सरकारले सार्कको सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा परिहवन तथा यातायात व्यवस्था समिति गठन गरेको छ, जसको मातहतमा रहेका र सुरक्षा मुद्दासँग जोडिएका मात्र १५ वटा उपसमितिहरू छन् । सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथि पवनबहादुर पाण्डेको संयोजनमा गृह मन्त्रालय र चारवटै सुरक्षा निकायको संयुक्त टिम बनाइएको छ ।
आयोजक राष्ट्रका हिसाबले नेपाल त आफ्ना पाहुनालाई आतिथ्य र तिनको चुस्त सुरक्षा बन्दोबस्तमा क…
भीभीआईपी उडान गर्दा अन्य जहाज नउड्ने
काठमाडौ, मंसिर ४ - सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुने अति बिशिष्ट व्यक्तिहरूको जहाज आगमन र प्रस्थानका बेला आकाशमा अरू जहाज नउडाइने भएको छ । सरकारले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर उडानका बेला १५ मिनेट पहिले र १५ मिनेटपछिसम्म कुनै पनि जहाज नउडाउने तयारी गरेको हो ।
सार्क सम्मेलनका बेला मसिंर ९ देखि १२ गते चार दिनसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल २४ सै घण्टा खुल्ला रहने भएको छ । अहिले राति १२ बजेदेखि बिहान ६
बजेसम्म विमानस्थल बन्द हुने गरेको छ । अतिबिशिष्ट ब्यक्तिको आवागमनका कारण प्रभाबित हुने भन्दै त्यसरी प्रभाबित हुने बिमानलाई राति ल्याइने भएको छ । 'भिभिआईपीको सवारीका बेला अन्य उडानहरु गराउन नमिल्ने भएकाले त्यो बेला प्रभाबित भएका उडानलाई अन्य समयमा ल्याउने ब्यवस्था मिलाइएको हो' बिमानस्थलका एक अधिकारीले भने- 'चार दिनसम्म २४ घण्टा नै बिमानस्थल खुल्ला रहनेछ ।' यस्तै, त्यो बेला आन्तरिक उडानहरु पनि प्रभाबित हुने भएका छन्् । 'उडानहरु बन्द नै नभएपनि धेरै कम उडान हुनेछन' ति अधिकारीले भने 'भिभिआईपीहरुको आउने समय निश्चित भईसकेको छैन ।'
पाहुनाका खानामा विशेष निगरानी
सार्क सम्मेलन तयारी
काठमाडौ, कार्तिक २९ - सार्क सम्मेलनमा अतिविशिष्ट व्यक्तिको खाद्य तथा पेय पदार्थको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गरिने भएको छ । त्यसका लागि अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा उपसमितिअन्तर्गत छुट्टै खाद्य तथा पेय पदार्थ सुरक्षा टोली बनाइएको छ । खाद्य तथा गुणस्तर विभागका प्रतिनिधिले परीक्षण गरेपछि खाद्य पदार्थ अतिविशिष्टलाई दिइनेछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने राष्ट्र तथा सरकारप्रमुख बस्ने होटल सोल्टीको किचेनमा सुरक्षा अधिकारीहरू परिचालन गरिनेछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पेय पदार्थका साथै खानाहरू तयार हुँदादेखि विशिष्ट व्यक्तिलाई 'सर्भ' नगर्दासम्म निगरानी गर्नेछन् । होटलसँग समन्वय गरी 'सेफ' हरूमाथि पनि निगरानी हुनेछ । एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले भने, 'होटल प्रवेश गर्नुअघि र निस्किएपछि उनीहरूले भेट्ने मान्छे र उनीहरूका गतिविधिमाथि प्रहरीले निगरानी राख्नेछ ।'
विमानस्थलमा सुरक्षालाई कार्यदल
काठमाडौं, कार्तिक २९ - सार्क मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुको आगमनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको सुरक्षा ब्यवस्था चुस्त बनाउन कार्यदल बनेको छ । यो कार्यदलले अतिबिशिष्ट ब्यक्तिको सुरक्षा चार घेरामा दिने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाका बिमानस्थलमा रहेको ईन्जिनियर निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी बिजेन्द्र गौतमको संयोजनमा बिमानस्थल सुरक्षा समिती बनाइएको छ । समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग, अध्यागमन बिभाग र भन्सार बिभागका प्रतिनिधी सम्मेलित छन् । स्रोतका अनुसार अतिबिशिष्ट ब्यक्तिको सुरक्षालाई निकटतम, भित्री, मध्य र बाहिरी गरी चार तहमा बिभाजन गरिएको स्रोतले जनायो । अतिबिशिष्ट ब्यक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाको बिशेष कार्यदलले लिने गर्छ । यसमा पनि निकटतम घेरामा नेपाली सेनाको उक्त कार्यदल छ । त्यो भन्दा बाहिरको भित्री र मध्य सुरक्षा घेरा सेनाले नै सम्हाल्नेछ । बाहिरी घेरामा नेपाल प्रहरी छ । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग -गुप्तरचर)ले आफ्नो हिसाबले सुचना संकलनको कार्य गर्नेछ । बिमानस्थलका साथै…
अदालतले बढुवाको आदेश दिएका डिआईजिपीको पदावधी सकियो
काठमाडौ, आश्विन २२ - सर्वोच्च अदालतले बिशेष पद सृजना गरी बढुवा गर्न आदेश गरेका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजिपी)को पदावधी समाप्त भएको छ । सरकारले समय रहदाँसम्म बिशेष पद सिर्जना नगरेका कारण उनीहरु पाँच बर्षे डिआईजिपीको पदावधी सोमबार देखी सकिएको हो । डीआईजिपीहरु यादब अधिकारी, शुसिलबरसिंह थापा, बिश्वराजसिंह शाही र पर्शुराराम खत्री उक्त पदमा ५ बर्षे कार्यकाल पुरा गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिसद्धय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको ईजलासले गत असोज ८ गते ४ डिआईजिपीलाई पुरानै मितिबाट बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको अर्कोदिन देखी अदालत बन्द छ । दशैं अघि सरकारले उनीहरुको बढुवा गर्ने वा सर्वोच्चको आदेशको बिपक्षमा पुनरावलोकनमा गएको छैन । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका दुई डीआईजिपीको मात्र बढुवा गरेपछि सरकार नेपाल प्रहरीका डीआईजिपीको पद बढुवाका लागि सकरात्मक नदेखिएको गृह स्रोत बताउँछ ।
'सरकारले अदालतको आदेश मान्ने छाँटकाट देखाएको भए, हिजो नै बिशेष पद सिर्जना हुन्थ्यो' गृहका एक उच्च अधिकारीले भने 'पुनरावलोकनमा जाने…
न सकिन्छ गरि खान नसकिन्छ मरि जान बुढेसकालैमा
दुख कष्ट गरेर छोरा छोरी हुर्काए, ठुला बनाए, चराले झै ति छोरा छोरी पखेटा लागेपछि उडेर गए । अनि जीवनको दोस्रो ईनिङमा आएर बेघर र बेसाहारा बनेपछि पशुपति क्षेत्र बिकास कोष भित्रर रहेको बृद्दाश्रममा उनीहरु बसेका छन् । ठुला बडाले आशिक दिएर मनाउने दशैं उनीहरुका लागि खल्लो बन्यो । दशैं आएको भन्दा नआएको जाति लाग्यो ।
उखान छ नि ‘बाबुआमाको मन छोरा छोरी माथी छोरा छोीको मन ढुङगा मुडा माथी । टीकाको दिन मेसो मिलाएर आश्रममा पुग्दा उनीहरु छोराछोरीको बाटो हेरेर बसेका थिए । कोही भित्र भित्रै रोए । कोही भक्कनिएर आफ्ना आशुँ झारे । दुख पोखे ।
७६ वर्षीया मैया अधिकारी दशैं टीकाका दिन आखाँ आँशुले भरिएका थिए । यो वर्ष पशुपति बृद्धाश्रममा आएकी उनले घरमा दशै मनाउन नपाएकाले नरमाइलो मानिरहेकी थिइन् । हत्केलाले आँशु पुसिन् र भनिन् 'घर जस्तो रमाईलो त कहाँ हुन्छ र ?' काठमाडौं नारायणथान घर भएकी अधिकारीका लागि आश्रममा पहिलो दशैं हो । ६ महिना अघि मात्र उनी नारायणथानबाट आश्रम आएकी हुन् । 'लाउन खान नपुगेर होईन, सहारा कोही नभएर आएकी हुँ' उनले सुनाईन् 'श्रीमान् र छोरी बितेपछि केही बर्ष माईतमा बिताएँ, …
महिला तस्करी बढेको बढ्यै
तीन आर्थिक वर्षमा ५ सय ८४ महिला तस्करी भएर विदेश पुगेका छन्। काठमाडौ, भाद्र ३१ केही दिनअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दुबईमा घरेलु कामदारका लागि जान लागेका दुई युवती साँझ हनुमानढोका पुगे। दुबई उड्न ठिक्क परेका उनीहरू श्रम स्टिकर नक्कली भएको थाहा पाएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा पुगेका हुन्। उनीहरूलाई पर्साका कृष्ण विकले बिनापैसा दुबई पठाउन लागेका थिए। समूहमा रहेर जान लागेका ती युवती नक्कली कागजपत्र भएको सुइँको पाएपछि हनुमानढोका पुगेका थिए। महाशाखाले बुधबार राति नै उक्त घरमा छापा मारेर विकलाई पक्राउ गर्नुका साथै त्यहाँ बन्धक बनाएर राखिएका ५ युवतीको उद्धारसमेत गरेको छ। महाशाखा प्रमुख एसएसपी पुष्कर कार्कीले तस्करी गरेर खाडी मुलुक पठाउन तयारी गरिएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बताए। उद्धार गरिएकाहरू नवलपरासी, सिन्धुली, चितवनका महिला हुन्। मुलुकमा महिला र बालबालिकाको तस्करी हुने क्रम बढेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ५ सय ८४ महिला तस्करी भएर विदेश पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १ सय ३० महिला बेचिएका छन्। यस्तै २०६९/०७० मा १ सय ५८ जन…
अढाई बर्षपछि एआईजिपी ४ मात्र
काठमाडौं– सरकारले नेपाल प्रहरीमा थप गरेको दुई अत्तिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजिपी) सहित तीन जनाको दबरन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको अघिल्लो बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ दरबन्दी कटौती गरेर ४ जना मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो । गृहसचिब सुर्य सिलवालले प्रहरीमा एआईजिपी पद बढि भएकाले अहिलेका आईजिपी र एआईजिपीले अवकास पाएपछि त्यो दरबन्दी घटाउने निर्णय भएको बताए । ‘प्रहरी संगठनका लागि ४ जनाको पद नै काफी हो’ उनले भने ‘अहिले भएका एआईजिपीहरुको कार्यकाल सकिएपछि यो लागु हुनेछ ।’
उपेन्दकान्त अर्यालयको ब्याचले २०७३ फागुनमा अवकास पाएपछि नयाँ ब्याचमा ४ जना मात्र एआईजिपी रहनेछन् ।
सरकारको यस्तो निर्णयलाई पुर्व सुरक्षा अधिकारीहरुले हचुवाको तालमा गरिएको बताएका छन् । पुर्व गृहसचिब उमेश मैनालीले प्रहरी जस्तो संवेदनशिल निकायको नितीगत तहको निर्णय अब्यवहारीक भएको बताए । ‘आफूलाई आवश्यकता पर्दा दरबन्दी थप्ने र नपर्दा खारेज गर्ने अभ्यास गलत हो’ उनले भने ‘दरबन्दी थप्ने हटाउने पद्धती अनुसार गनुपर्नेमा आफू अनुकूल गरियो ।’ सरकारी कार्यालयमा तल्लो दर्जाको सुब्बा नायब सुब्बाको दरबन्दी…
दुर्गन्ध फैलाउँदै सार्वजनिक शौचालय
काठमाडौ, भाद्र १ - गाउँबाट विभिन्न सेवा, पहुँच र अवसर खोज्दै उपत्यका भित्रिनेहरूको संख्या धेरै छ। खासगरी उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहरी क्षेत्रमा बाहिरबाट आउने सर्वसाधारणको भीड बढ्दो छ। उसै पनि यी तीन सहरलाई अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुँदै गएको जनसंख्याले अस्तव्यस्त बनाउँदै गएको छ। समस्या बढ्दो छ। तीमध्ये एक हो सार्वजनिक शौचालयको अभाव। करिब ३० लाख व्यक्ति बसोबास गर्ने यी तीन जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको संख्या सयवटा पनि छैन। भएका शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन्। अझ अपांग र महिलामैत्री त छँदै छैन। अस्पताल, नगरक्षेत्र, प्रहरी कार्यालय लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्थाबारेकल्पना घिमिरे, प्रतिमा बाँस्कोटा, दीपेन्द्र विष्ट, जगदीश्वर पाण्डे, लीला श्रेष्ठ र प्रशान्त माली लेख्छन्- भक्तपुरकी रेनुका खत्री किनमेलका लागि न्युरोड वा असन कतै जानुपर्‍र्यो भने प्रायः पानी पिउँदिनन्। कारण हो, किनमेलका लागि उनको छनोटमा परेका क्षेत्रमा शौचालय अभाव। 'पानी खाएपछि पिसाब त लाग्छ, अनि शौचालय खोज्नुपर्ने समस्या हुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'सामान किन्ने ठाउँमा शौचालयबारे सोध्दा छैन भन्ने …
मोदीको सुरक्षा मोबाईल जामर पनि
नाका नाकामा चेकिङ
भारतिय सुरक्षा निकायको शंकास्पद सुची
काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आईतबार हुने भ्रमणको सुरक्षा तयारी पुरा भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । गृह प्रवक्ता सहसचिब लक्ष्मी ढकालले सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको बताए । ‘सुरक्षामा कुनै कन्जुस्याँई हुन्न । आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने ‘सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको छ ।’ सुरक्षा अधिकारीहरुले शनिबार उनको भ्रमणमा कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने बिषयमा ‘रिहलसर्ल’ समेत गरेका थिए । त्यसमा बिमानस्थलमा मोदी अवतरण गरेपछि हायत होटल र त्यसपछि उनी सहभागि हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदानका बिषयमा रिहर्सल गरिएको हो ।
मोदीको सुरक्षा भ्रमणका लागि खटिने ४ वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक, पत्रकार लगायतका लागि बिशेष पासको ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मोदीको सुरक्षाका लागि भारतबाट आएको ‘स्पेशल प्रोटेक्सन ग्रुप एडभान्स टिम’ का सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षा योजना र कामको प्रकृतीका बारेमा महानगरीय प्रहरी आयूक्तको कार्यालयले ‘ब्रिफिङ’ गरिसेको छ ।
स्रोतका अनुसार गृहमा शा…
प्रहरीमा गुप्तचर ब्युरो
काठमाडौ, श्रावण १२ - नेपाल प्रहरीले आपराधिक गतिविधि निगरानी र नियन्त्रण गर्न अलग्गै 'इन्टिलिजेन्स ब्युरो' बनाउने तयारी गरेको छ। अपराध अनुसन्धान विभागले आपराधिक सूचना सञ्जाल विकास र विस्तार गर्न ब्युरो खडा गर्न लागेको हो।
प्रहरी मुख्यालयको ३ वर्षे कार्ययोजनामा यसबारे उल्लेख छ। मुख्यालयमा अर्को सोमबार हुने पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठकमा कार्ययोजना पेस गर्ने तयारी छ। विभागको योजनाअनुसार तीन वर्षमा नायब महानिरीक्षक प्रमुख रहने यो ब्युरोले पूर्णता पाउनेछ।
अपराध अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिँदै
काठमाडौ, श्रावण ११ - प्रहरी मुख्यालयले सरुवा र बढुवामा अपराध अनुसन्धान गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । मुख्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना बनाएर त्यसरी अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो ।
यसका लागि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको सेवा विशिष्टीकरण गरेर त्यहीअनुसार उनीहरूको वृत्ति विकासको मापदण्ड पनि तयार पारिएको छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै त्यस्ता काममा खटिने प्रहरीको मनोबल बढाउन तलबको २५ प्रतिशत छुट्टै भत्ता व्यवस्थाका लागि प्रस्तावसमेत गरिएको छ
अलग्गै समूह बनाएर अपराध अनुसन्धान गर्दा राम्रो प्रतिफल आउने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन छुट्टै समूह बनाएर मूल्यांकन गर्न लागिएको बताए । 'अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेको कुरा प्रहरीको वृत्ति विकासमा जोडिँदैन थियो । अब उसको मूल्यांकनको आधार नै अनुसन्धानमा गरेको प्रगति मानिनेछ,' शाहले भने, 'समग्रमा प्रह…
शवहरुका बीच एक डाक्टर
पोस्टमार्टमका विशेषज्ञ डाक्टर हरिहर वस्ती २३ वर्षअघि जुन पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए, आज पनि त्यसैमा छन् । हत्या वा आत्महत्याको परिक्षण गर्ने उनको कामलाई यसले केही असर पारेको छैन ।
महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा बाहिरबाट हेर्दा सफा देखिने नयाँ भवन छ । अघिल्लो आइतबार बिहान त्यहाँ पुग्दा डा. हरिहर बस्ती मानिसको शव चिर्न तयार हुँदै थिए । उनी एकैछिनमा चिर्ने कक्षमा गए । कक्षको २० मिटर बाहिरै गन्ध आइरहेको थियो । भित्र छिर्दै जाँदा गन्ध कडा हुँदै गयो । कोठाभित्र पुगेपछि त गन्ध बेहोसै हुने गरी आयो । त्यहाँ ४ वटा बेडमा मानिसका केही दिन पुराना शव थिए । एउटा चिरिँदै थियो । मलाई यो कोठामा दुई मिनेट पनि बस्न गाह्रो भयो । दौडिएर बाहिर निस्किएँ ।
मलाई दुई मिनेट टिक्न मुस्किल परेको कोठामा डाक्टर हरिहर वस्तीको टोलीले हरेक दिनजसो शवको चिरफार गर्ने काम गर्छ । दैनिक औसत ५–७ वटा शव † शंकास्पद मृत्यु भएकाहरूको शरीर चिरफार गर्ने डाक्टर वस्ती नेपालका पुराना र अनुभवी ‘फरेन्सिक’ विशेषज्ञ हुन् । कसैको हत्या भएको हो या भवितव्य, पत्ता लगाउने जिम्मा उनकै टोलीको हुने गरेको छ ।
ललितपुर कुपण्डोलका विनय मानन…
प्रहरी मुख्यालय भित्र चप्पल र मोबाईल निषेध
काठमाडौं– नक्साल स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक गणेश केसीलाई शुक्रबार एउटा फोन आयो । ‘सर चप्पल लगाएर भित्र आउन दिएन ।’ उनले उताबाट जवाफ फर्काए ‘प्रहरीको मुख्यालयमा आउँदा पनि चप्पल लगाएर आउने त ?’ प्रवक्ता केसीले गेटमा बसेको प्रहरीलाई फोन गरेर चप्पल सहित भित्र पठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
अचेल प्रहरी मुख्यालयमा सर्वसाधारणलाई चप्पल लगाएर जान निषेध गरिएको छ । यस्तै मोबाईल फोन, पेनड्राईभ जस्ता बिद्युतिय उपकरण पनि उनीहरुले साथ लैजान पाउँदैनन् । मुख्यालयको प्रशासन शाखाले परिपत्र जारी गर्दै प्रहरी कर्मचारी सहित सर्वसाधारणलाई समेत चप्पल लगाएर भित्र प्रवेस गर्न नदिन भनेको छ । परिपत्रको तेस्रो नम्बरमा ‘प्रहरी कर्मचारी बाहेक अन्य ब्यक्तिको हकमा समेत अमर्यादित पोशाक र चप्पलमा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रवेस गर्न दिईने छैन’ उल्लेख छ ।
मर्यादित पोशाक भित्र पुरुषहरुका लागि दौरा, सुरुवाल, टोपी, जुत्ता, सर्ट पाईन्टलाई राखिएको छ । यस्तै महिलाका लागि सारी, चोलो/ब्लाउज, कुर्ता सुरुवाल वा सुहाउँदिलो र भड्किलो नहुने गरी लगाएकालाई मात्र भित्र प्रवेस गर्न अनुमति दिएको छ ।
प्लास्टिकमा अंग !
काठमाडौ, श्रावण ३ - पोस्टमार्टममा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि 'भिसेरा' परीक्षण गराउन मानव अंगका नमुना निकाल्ने गरिन्छ । यसरी निकालिएका नमुना प्रहरीले सम्बन्धित ल्याबमा पुर्‍याएर थप परीक्षण गराउनुपर्ने हो । तर प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नदिँदा प्रयोगशालामै सड्न थालेका छन् ।
शंकास्पद मृत्यु भएका व्यक्तिको अनुसन्धान गर्न निकालिएका शरीरका भित्री अंग प्रहरीको लापरबाहीले सड्न थालेको छ । पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुर्‍याइएका शवको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन चिकित्कले मुटु र कलेजो निकाल्ने गरेका छन् । अस्पतालको विधिविज्ञान प्रयोगशालास्थित बन्द कोठामा २०६४ देखि यता शंकास्पद मृत्यु भएका ६ सय ३ जनाको मुटु कलेजो र रगतको नमुना प्लास्टिकको बोतलभित्र छ । यी नमुना काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा घटेका शंकास्पद घटनाका व्यक्तिका हुन् ।
पोस्टमार्टममा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि 'भिसेरा' परीक्षण गराउन ती नमुना निकाल्ने गरिन्छ । यसरी निकालिएका नमुना प्रहरीले सम्बन्धित ल्याबमा पुर्‍याएर थप परीक्षण गराउनुपर्ने हो । तर प्रहरीले अनुसन्धानमा …
१४ बर्षघि अमेरिकामा फरार भएका नेपालमा पक्राउ
काठमाडौ, श्रावण ४ - आफ्नै विद्यार्थीमाथि यौन दुर्ब्यवहार गरेको अभियोगमा जमानतमा रिहा भएदेखि फरार भएका एक अमेरिकी नागरिक नेपालमा पक्राउ परेका छन् । ४७ वर्षीय निल स्टेमर नक्कली अमेरिकी पासपोर्टसहित सुन्धराबाट पक्राउ परेका हुन् ।
अमेरिकाको न्यू मेक्सीकोमा उनी सन २००० मा जमानतमा रिहा भएदेखि फरार थिए । नेपालमा पक्राउ गरेपछि उनलाई अध्यागमन ऐन उल्लंघन गरेका अभियोगमा जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो । अदालतले उनलाई १५ हजार रुपैंया धरौटीमा रिह गरेपछि तुरुन्तै अमेरिका फर्काइएको हो । उनलाई अमेरिकी बिमानस्थलबाट न्यू मेक्सिकोको बर्नालिलो काउन्टी नगरपालिका लगिएको छ ।
अध्यागमन विभाग प्रमुख शरदचन्द्र पौडेलका अनुसार ३ महिनाअघि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुताबासले स्टेमर नक्कली पासपोर्ट लिएर बसेको जानकारी दिएको थियो । पौडेलका अनुसार स्टेमर 'केभिन जोहन हुज' नाममा नेपालमा बस्दै आएका थिए ।
‘आमा हत्याको’ बदला लिन १५ लाखको सुपारी
काठमाडौ, असार २१ - सोह्र वर्षकी छँदा आँखैअगाडि आमालाई जलाइएपछि उक्त आगो निभाएकी एक किशोरी त्यसको बदला लिन के-के गर्छिन् ? तर सफल हुँदैनन् । प्रतिमा बाँस्कोटा २०६५ जेठ ९ गते । १६ वर्षीया रेखा (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको चाबहिलस्थित घरमा बेलुकीको खाना खाएर कोठामा पढ्दै थिइन् । भोलिपल्ट कक्षा ११ को लेखाको परीक्षा थियो । पढ्दापढ्दै उनी ओछ्यानमै निदाइन् । ४१ वर्षीया आमा अम्बिका, भान्सैमा थिइन्, बाबु (मुरारी धमला) लाई खाना कुर्दै । मुरारी कान्छी श्रीमती ममतापट्टिकी छोराको न्वारानमा गएका थिए । अचानक, राति ११ बजे भान्सा कोठामा दनदनी आगो लाग्यो । छिमेकीले हल्ला गरे । आमा चिच्याइन् । उनको निद्रा खुल्यो । आमा 'बुनु मलाई बचाऊ, बुनु मलाई बचाऊ' भन्दै उनको झ्यालतिर आइन् । रेखा आत्तिइन् । कोठा खोल्न खोजिन्, तर बाहिरबाट चुकुल लगाइएको रहेछ । भित्रबाट चिच्याइन् । कोठाको झ्यालमा सिसा लगाएको थिएन । त्यहाँबाट कौसीमा निस्किइन् । र, धाराको पानी थापेर ज्यानमा बलिरहेको आगो निभाइन् । आमा 'मलाई पापीले मार्‍यो' भन्दै कराउँदै थिइन् । बाबुले एकैछिनपछि आएर के भो भने । उनको गला अवरुद्ध भयो । बाबुको गालामा …
उजुरी समितिले गर्‍यो हेरफेर
एआईजी बढुवा प्रकरण:
काठमाडौं , असार १७ - नेपाल प्रहरीको एआईजीपी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका ७ नाममा उजुरी सुन्ने समितिले फेरबदल गरेको छ । डीआईजीपी रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदलाई हटाएर गणेश राई र नारायण बस्ताकोटीलाई ल्याइएको छ । गृहसचिव सूर्य सिलवाल संयोजक, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दुर्गानिधि शर्मा र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सदस्य रहेको बढुवा समितिको जेठ १३ को सिफारिसमा हेरफेर गरिएको हो । नयाँ प्रहरी नियमावलीमा बढुवा समितिको सिफारिसलाई उजुरी सुन्ने समितिले पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान छ । त्यसअनुरूप लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमी संयोजक र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, कानुन सचिव भेषराज शर्मा सदस्य रहेको उजुरी सुन्ने समितिले सिफारिसमा परिवर्तन गरेको हो । स्रोतका अनुसार बढुवा समितिको सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजीपी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई तेस्रोमा झारेर विज्ञानराज शर्मालाई उकालिएको छ । संशोधित सिफारिस असारको पहिलो साता गृह मन्त्रालय पठाइदिएको हो ।
सुन ल्याउने छुटे, बोक्ने जेलमै
काम अह्राउने र सुन तस्करी गर्नेचाहिँ छुट्ने यो कसरी भयो ? कानुन नै यस्तो त होइन होला ?'
काठमाडौं, असार १६ - सुन तस्करीको अभियोगमा थुनामा रहेका निमा छिरिङ तामाङका दिनहरू बडो कष्टले बितिरहेका छन् । मुख्य अभियुक्तहरू थुनामुक्त भइसक्दा पनि भरिया बनेको आफूलाई किन थुनियो भन्ने जवाफ नपाएर एक वर्षदेखि नख्खु जेलमा बसिरहेका साधारण लेखापढा छिरिङ झनै हैरान छन् । 'कस्तो कानुन हो यो देशको ?' शुक्रबारको एक भेटमा उनले भने, 'म भारी बोक्ने जेलमै छु, भारी बोकाउने साहूहरू छुटिसके ।' उनी २०७० असार २६ गते कोटेश्वरमा सुनसहित पक्राउ परेका थिए । 'बिहान साढे ४ भएको थियो, कोटेश्वरमा प्रहरीले ट्रक रोक्यो,' छिरिङले भने, 'सुन लुकाएर ल्याएको सुराक उनीहरूले पाइसकेका रहेछन्, मलाई तुरुन्तै समाते ।' 'कुनै बिलबिजक नभएको ३५ केजी सुनका लाप्साहरू प्लास्टिकले बेरेको अवस्थामा फेला परेको' भन्ने प्रहरीको मुचुल्कामा उनले सहीछाप गरिदिए । तर सँगसँगै समग्र घटनाबारे प्रहरीलाई विस्तारमा बताए, जसबाट उनी भरियामात्र रहेको प्रस्ट हुन्थ्यो । तीन वर्षदेखि गाडी चलाउन थालेका थिए छिरिङले । हेवी ट्र…
घर भत्कँदा ४ को मृत्यु, ५ घाइते
सन्तान देख्न पाएनन्
'मेरो सबै सकियो’
'आकाशै खसेजस्तो भो’
काठमाडौं, असार १४ - राजधानीको लगनस्थित ब्रह्मटोलमा भत्काइँदै गरेको पुरानो घर शनिबार 'गर्ल्याम्-गुर्लुम्' भत्कँदा भुइँतलामा रहेका चार जनाको ज्यान गएको छ । अन्य पाँच घाइते छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-१२ स्थित इस्तिका श्रेष्ठको घर भत्काउने ठेकेदार र तीन मजदुरको मृत्यु भएको हो । ठेकेदार अमर भनिने पोतबहादुर पाण्डे र कामदारहरू नुवाकोट तारुकाका ४० वर्षे गणेश विक, खोटाङ धारापानीका २७ वर्षे भूपाल मगर र धादिङ बैरेनीका ३५ वर्षे विष्णु भण्डारीको मृत्यु भएको हो । चार तले घरको माथिका दुईवटा तला भत्काइसकिएको थियो । घटना हुँदा मजदुरहरू खाना खाएर भुइँतलामा आराम गरिरहेका थिए भने ठेकेदार काम हेर्न भर्खरै मात्र आइपुगेका थिए । घाइते भएकामा खोटाङ धारापानीका १८ वर्षे जीवन मगर, नुवाकोटा चोकतेका ५० वर्षे मानबहादुर तामाङ, मोरङ इटहराका मंगल भुजेल, धादिङ जीवनपुर-८ का ३२ वर्षे राजन तामाङ र नुवाकोट तारुकाकी ३२ वषर्ीया मसिना विक छिन् । विक मृतक गणेशकी श्रीमती हुन् । वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घाइतेमध्ये विकको अवस्था गम्भीर छ । मृतकको शव पोस…
कहिले फुक्छ बढुवाको गाँठो ?
अहिले कुनै चिनजानको प्रहरी भेटियो भने उसको पहिलो प्रश्न हुन्छ, 'एआईजीपीको बढुवा कहिले हुन्छ ?' फिल्डमा खटिएका प्रहरी हुन् वा मुख्यालयमा बसेर नीति नियम बनाउने सबै पुलिसकर्मीलाई बढुवाकै चासो छ । 2070 कात्तिक २९ गतेदेखि रिक्त रहेका ७ वटा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) को पदमा नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) को बढुवा प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो अवरुद्ध हुँदा यतिबेला प्रहरीहरू तनावमा छन् । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने पुलिस अधिकारी आफ्नै संगठनको बेथिति देखेर चिन्तित छन् ।
प्रहरी 'चेनअफ कमाण्ड'मा चल्ने संगठन हो । यहाँ माथिल्लो तहको बढुवापछि एवंरीतले तल्लो तहमा हुने प्रचलन छ । अर्थात् यतिबेला अवरुद्ध ७ एआईजीपीको बढुवाले सिंगो संगठनलाई प्रभावित गरेको छ । कात्तिक २९ मा उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरिएपछि ७ डीआईजीपीलाई एआईजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । संविधानसभाको चुनाव मुखैमा भएको भन्दै बढुवा गरिएन । बढुवाका प्रबल दाबेदार डीआईजीपीहरू क्षेत्रीय कमाण्ड सम्हालिरहेका थिए । चुनावमा उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर फर्किएपछि उनीहरूमा बढुवाको अपेक…
डिआईजी बढूवा नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज
प्रहरीमा बढूवाको बाटो खुल्यो
काठमाडौ, असार ३ - पुनरावेदन पाटनले प्रहरीको बढूवा कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । बढूवा सिफारिसमा नपरेको भन्दै डीआईजी पर्शुराम खत्रीले दायर गरेको रिटमा अदालतले जेठ २६ मा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा अपूरणीय क्षति हुने नदेखिएको भन्दै यसअघिको फैसला खारेज गरेको हो । बढूवा सिफारिसमा परेका ६ डीआईजीले अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । कात्तिक २९ देखि रिक्त ७ एआईजी पूर्ति प्रक्रिया नियमावली संशोधन नहुँदा करिब ६ महिनादेखि अडि्कएको थियो । डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउद एआईजी बढूवाको सिफारिसमा परेका थिए ।
सीमा नक्सा हस्ताक्षरमा हतार नगरौं : निधि
दसगजा दुवैतर्फबाट मिचिँदै
काठमाडौं, असार ३ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल-भारतबीच प्रस्तावित सीमा नक्सामा हस्ताक्षरका लागि हतार गर्न नहुने बताएका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रणजित रायले नेपाल-भारत सीमाको सुस्ता र कालापानीलगायत विवादास्पद स्थानबाहेक तयार भएको बाँकी भूभागको सीमांकन नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसको जवाफमा मन्त्री निधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
'नेपाल-भारत खुला सीमा : समस्या र धारणा' विषयक कार्यक्रममा राजदूत रायले दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ताको विषयलाई पछि राजनीतिक र फरक ढंगले समाधान गर्ने गरी थाती राख्न सकिने बताएका थिए । नेपाल-भारत सीमांकनका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मा द्विदेशीय सीमाका १ सय ८२ स्थानको नक्सा तयार पारेको थियो । कालापानी र सुस्तालाई बाँकी राखेर अन्य स्थानको जीआईएस (भौगोलिक सूचना पद्धति) अनुसार सीमांकन गरी 'स्टि्रप म्याप' तयार पारिसकिएको छ । त्यसपछि देहरादूनमा बसेको २८ औं बैठकले ९८ प्रतिशत काम सकेको थियो । त्यसमा दुवैतर्फका सर्भे ज…
बढुवा समितिले जवाफ पठायो
काठमाडौं, जेष्ठ २८ - अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) बढुवाका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनलाई गृहसचिव सूर्य सिलवाल नेतृत्वको बढुवा समिति र प्रहरी मुख्यालयस्थित बढुवा समिति सचिवालयले जवाफ पठाएका छन् । दुवैले 'व्यावसायिक हिसाबले उल्लेख्य कार्य गर्न नसकेका नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) पर्शुराम खत्री आफू बढुवामा नपर्ने भएपछि खराब मनसायले अदालत गएको' जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
केन्या र तान्जियाका डान्सबारमा नेपाली युवती
काठमाडौ, जेष्ठ १७ -
केन्या र तान्जियाका डान्सबारमा रहेका नेपाली युवतीको उद्धारमा सघाउन नेपाल प्रहरीले ती मुलुकका इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको छ । भारत हुँदै त्यहाँका रेस्टुरेन्ट र डान्सबारमा पुर्‍याइएका नेपाली युवतीबारे केहीअघि कान्तिपुरले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलको पत्रको जवाफमा ती मुलुकले उद्धारका लागि थप सूचना माग गरेका छन् । ती युवतीको नाम, ठेगाना र उनीहरूको राहदानीको फोटोकपी माग गरिएको छ । तर प्रहरीले सूचना उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
६ डीआईजीद्वारा बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी
काठमाडौं, जेष्ठ १८ - नयाँ मापदण्ड अनुसार एआईजिपी बढुवामा नपरेका नेपाल प्रहरीका ६ डिआईजिपीले आईतबार उजुरी सुन्ने समितीको सचिबालयमा उजुरी गरेका छन् । प्रहरीको नयाँ नियमावली अनुसार बढुवा समितीको सिफारिसमा नपरेका उनीहरुले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै उजुरी सुन्ने समितीमा उजुरी दिएका हुन् । त्यसरी उजुरी दिनेमा डिआईजिपीमा यादब अधिकारी, गणेश राई, नारायण बस्ताकोटी, सुशिलबरसिंह थापा, बिश्वराजसिंह शाही र पर्शुराम खत्री छन् । लोकसेवा आयोगमा रहेको उजुरी सुन्ने समितीको सचिवालयमा उनीहरुले आईतबार दिउँसो एकैपटक गएर फरक फरक निवेदन तयार पारी बढुवा समितीले दिएको नम्बर प्रति असहमति जनाएका छन् ।
खरेल काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाइए
काठमाडौं– मर्यादा बिपरित आफ्नो संगठनका अधिकारीको बिपक्षमा अभिब्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरी मुख्यालयले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) रमेश खरेललाई मुख्यालय तानेको छ । उनको स्थानमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)का निमित्त प्रमुख एसएसपी उत्तम कुमार कार्कीलाई पठाउने भएको छ । प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा गृहमन्त्रालयले खरेललाई मुख्यालय बोलाएर कार्कीलाई पठाउन लागेको हो । कार्की अपराध अनुसन्धानमा राम्रा मानिन्छन् । तर असार ८ गते संविधानसभाको उप निर्वाचन हुने भएकाले मङगलबार निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर मात्र सरुवा गरिने भएको छ ।
ब्यावसायिक दक्षता भएका खरेलले दुई दिन अघि राजधानीको एक सार्वजानिक कार्यक्रममा आफ्ना संगठनका बरिष्ठ अधिकारी नायब महानिरीक्षक (डिआईजिपी)हरु बढुवाका लागि ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको अभिब्यक्ति दिएर विबादमा तानिएका थिए । उनले संगठनको निती बिपरित गएर अभिब्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरी मुख्यालयले डिआईजिपीको संयोजनमा छानबीन समिती समेत गठन गरेको छ । खरेललाई आईतबार नै मुख्यालय तानिने तय भएको थियो । तर काठमाडौंमा कसलाई पठाउने भन्ने बिषयमा निर्णय हुननसक्द…
हाकिम बिरुद्ध बोलेपछि रमेश खरेल माथी कारबाहीको तयारी
काठमाडौ, जेष्ठ ११ - काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश खरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा संगठनका बरिष्ठ अधिकृतबारे गलत अभिब्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरी मुख्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ । खरेलले शनिबार प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो संगठनका भ्रष्ट डीआईजीहरु एआईजी पदमा बढुवा हुन ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको अभिब्यक्ति दिएका थिए । मुख्यालयले जिम्मेवार पदमा बसेर आफ्नै सगठनका अधिकारीहरुको बिरुद्धमा बोलेर संगठनको चेनअफ कमाण्ड बिथोलेको भन्दै उनी माथि छानबीन गर्न मुख्यालयका नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) विज्ञानराज शर्माको नेतृत्वमा ३ सदस्यिय समिति बनाएको हो । समितिलाई एक हप्ता भित्र खरेलले उक्त कार्यक्रममा बोलेको अभिब्यक्ति माथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका एसएसपी रमेश पाण्डे र कानुन शाखाका एसपी गणेश थापा छन् ।
पहिला आफ्नो, पछि अरूको
मृगौला बेचबिखनकाठमाडौं, जेष्ठ ११ - कलंकीका २५ वर्षीय रञ्जित महर्जन महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको हिरासतमा छन् । उनीमाथि एक सर्वसाधारणको मृगौला बेच्न मतियारको भूमिका खेलेको अभियोग छ । काभ्रे बाँसबारीका २० वर्षीय रमेश सुनारको मृगौला अरूलाई बेच्न लगाएको अवस्थामा महर्जनसहित दस पक्राउ परे । तीमध्ये ६ जना यसअघि नै आफ्नो मृगौला बेचिसकेका पाइए । महर्जनले २१ वर्षमै आफ्नो मृगौला बेचेका थिए । मखनमा पार्किङको रकम उठाउने उनले त्यही पार्किङका ठेकेदार सुवास नेवारलाई भारतको मुम्बई पुगेर मृगौला दिएका थिए । फर्केपछि उनले त्यसबापत केही रकम पाएका थिए । पार्किङको जागिर गएपछि उनले पेन्टिङको काम थाले । '४/५ महिनासम्म भारी सामान उठाउन नहुने भएपछि पार्किङको काम छाडें,' उनले भने, 'त्यसपछि घरमा रङ लगाउने काम थालें ।' घरमा रङ लगाउने, सिमेन्ट इँटाको काम गर्नेहरूको समूहले राजधानीमा मृगौलाका बिरामी खोज्दै आफ्नै सर्कलका मान्छेलाई बेच्न लगाएर कमिसन खाने गरेको पाइएको छ । महर्जनसहित पक्राउ अन्य ५ ले आफ्नो मृगौला भारतका विभिन्न सहरमा पुगेर ५० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका थिए ।
यसरी दाइजो रोकिएला र ?
काठमाडौं, जेष्ठ ६ - दश ग्रामसम्म सुन दिनसक्ने लगायत दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रावधानहरु राखेर सरकारले सामाजिक व्यवहार (सुधार) विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । यसै त दाइजो प्रथा समाजका विभिन्न तहमा कलंकका रुपमा स्थापित भएका बेला राज्यले त्यसैलाई बढवा दिन लागेको हो । गृह मन्त्रालयले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ लाई विस्थापित गर्न नयाू मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई संसद सचिवालयमा दर्ता हो । अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गर्न थालिसकेका छन् । 'दाइजो भन्ने चिजै वहिष्कार हुनुपर्नेमा त्यसैलाई कानुनी रुपमै थप मलजल गर्ने काम हुन लागेको छ,' महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन ।
१४ नेपाली नागरिकको राहदानी बंगालीलाई
काठमाडौं, जेष्ठ ६ - विदेशमा रोजगारीमा जान लागेका २५ नेपालीको हस्तलिखित राहदानी मेनपावर सञ्चालकहरूले बंगालादेशीलाई बेचेको पाइएको छ । तीमध्ये ११ जनाको प्रहरीले फिर्ता ल्याइसकेको छ । साउदी अरबको भिषा लागेका ति राहदानी २९ लाख पचास हजार रुपैंयामा बिक्रि गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्दि्रय अनुसन्धान ब्युरोले जनायो । उसले राहदानी बेच्ने गिरोहका दुई जनालाई पक्रेको छ । पक्राउ पर्नेमा आरपी इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सिका सञ्चालक पुर्ण बहादुर मगर र अल जरिफा मेनपावरका कुमार पुरी छन् । गिरोहका मुख्य नाईके पाूचथर, नाङगिनका देवीप्रसाद काफ्ले फरार छन् । ब्युरोका बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) उत्तम कार्कीका अनुसार यि ३ जनाले बैदेशिक रोजगारीमा जान आउनेबाट भिषा लगाईदिने भन्दै राहदानी लैजाने गरेका थिए । भिषा लागेपछि त्यसलाई चर्को मुल्यमा बंगलादेशीलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ । खाडी मुलुकले भिषा दिन छाडेपछि बंगलादेशीहरु परिचय बदलेर नेपाली बनी त्यसतर्फ जाने गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार बंगालीलाई बेचेको रकम मगरले बुझेका थिए । त्यसमध्ये १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनले काफ्लेलाई दिएका थिए ।
पूर्व माओवादी कार्यकर्ता जेल चलान
कालमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको आरोपमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर गौतमलाई आज दिउँसो पक्राउ परेर प्रहरीले आजै जेल चलान गरेको छ । दुई बर्ष अघि ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले उनीसहित एमाओवादी पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई पनि सजाय तोकेको थियो । ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएको छ । ढुंगेलले २०५५ असार १० गते ओखलढुंगामा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको प्रमाणित गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ भदौ ३१ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो ।
पूर्वराजाको गाडी चढै आईजीपी
काठमाडौ, वैशाख ३१ - प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालले पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहले चढेको २६ वर्ष पुरानो बुलेटप्रुफ -गोली नछिर्ने) मर्सिडिज गाडी चढ्न थालेका छन् । गृह मन्त्रालयमा थन्किएका बा१झ ९२९३ र ९२९२ नम्बरका दुई मर्सिडिज कार गृहले मर्मत गरेर प्रयोग गर्न दिएको हो । तीमध्ये ९२९३ नम्बरको गाडी आईजीपी अर्यालले चढिरहेका छन् । अर्को प्रहरी मुख्यालयको एमटी (मोटर ट्रान्सपोर्ट) विभागमा मर्मतका क्रममा छ ।
प्रहरीकै सिक्री लुटियो
काठमाडौं, वैशाख २९ - सर्वसाधारणको सिक्री लुटेर हैरान पारिरहेका बेला राजधानीमा एक महिला प्रहरीले लगाएको गहना लुटिएको छ । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा कार्यररत प्रहरी हवल्दार सीता उप्रेतीले लगाएको २ तोलाको सिक्री शनिबार साँझ लुटेराले लखेटीलखेटी थुतेर लगेका हुन् । दिउँसो १२ बजे देखी ६ बजेसम्मको ड्युटी सकेर बालाजु घर फर्किदै गरेकी उनको स्कुटरलाई धक्का दिएर लडाउने प्रयास गर्दै लुटिएको हो । उनका अनुसार गंगा हलबाट माच्छापोखरी निस्कने बाटोको सुनसान स्थानमा स्कुटरलाई धक्का दिइएको थियो । सुरुमा त उनी झुक्किएर धक्का दिएको होला भन्दै अघि बढिन् । 'अघि जादै गर्दा मेरो साईडबाट आएको मोटरसाइकल मसंगसंगै हिड्यो,' उनले सुनाइन् 'अलिपर पुगेपछि एक्सिलेटर घुमाउने दाहिने हातमा झटा दिएपछि मैले कुदाउन सकिन ।' हातमा हानेपछि मोटरसाईकल चालकलाई गाली गर्न ऊतर्फ फर्किदा घाँटीको सिक्रि समातेको उनले बताईन् । 'एक हातले मेरो सिक्रि समात्दै अर्को हातले मोटरसाईकल कुदायो,' उनले भनिन् 'मैले छोड छोड भन्दै स्कुटर उसको पछिपछि कुदाएँ ।' केहि पर पुगेपछि आफ्नो सिक्रि गलाबाट छिनेर उसको हातमा पुग…
लुटिएला है सुन !!!!
काठमाडौं, वैशाख २७ - लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा बिहेभोजमा सहभागी भई बिहीबार साँझ एक दम्पती घर र्फकंदै थिए । भृकुटीमण्डपबाट भद्रकाली जाँदै गर्दा मोटरसाइकल पछाडि बसेकी महिलाको गलामा लगाएको झन्डै ५ तोला बराबरको नेकलेस मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले लुटेर लगे । साँझ साढे ६ बजे नै लुटिएपछि हारगुहार गर्दा मदत गर्ने भने कोही भएन । त्यही दिन गोंगबु बानियाँटार पुल नजिक पैदल यात्रा गरिरहेकी ४० वर्षीया इनकुमारी रोकाको ३ तोलाको सिक्री नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले लुटे । दुवै घटनाका लुटेरा पक्राउ परेका छैनन् । वैशाखयता १२ महिला लुटिएका छन् । नम्बर प्लेट छोपेको मोटरसाइकलमा आउने गिरोहले सिक्री वा गहना लुटेर भाग्ने गरेका छन् ।
२० लाख खर्चेर प्रहरी भवन उद्‌घाटन
काठमाडौं/अर्घाखाँची, वैशाख १६ - उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सामान्य औपचारिक कार्यक्रममा समेत खर्चिलो सहभागिता जनाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीको भवन उद्‌घाटन गर्न उनी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित सेनाको 'एमआई १७' हेलिकप्टर लिएर सोमबार बिहान त्यहाँ पुगे । त्यसको फाइदा उठाउँदै उनले छिमेकी जिल्ला प्यूठानको कार्यकर्ता भेलासमेत भ्याए । त्यहाँ पनि उनी प्रहरी महानिरीक्षकलगायत प्रहरी वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगै थिए । सरकार र विदेशी दातृ संस्थाको आर्थिक सहयोगमा २०७० वैशाखमा नै यसको निर्माण पूरा भएको थियो । तर भवन उद्घाटन गर्न 'विशिष्ट व्यक्ति' को समय नमिल्दा एक वर्षदेखि रोकिरहेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उद्घाटनका क्रममा उनले स्थानीय सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई भेटेका थिए । त्यसपछि उनले स्थानीय पार्टी कार्यालयमा गएर कार्यकर्तासँग भेटघाट गरे ।
सुटुक्क घुस्यो, प्रहरी नियमावलीमा दफा
काठमाडौ, वैशाख १४ -
प्रहरीको नयाँ नियमावलीमा बढुवासम्बन्धी राखिएको मापदण्डका कारण लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट एक साता अघि पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नियमावलीभित्र बढुवाका लागि तालिमसम्बन्धी नयाँ दफा थपेपछि प्रहरीभित्र असन्तुष्टिसमेत बढेको छ ।
नियमावलीको नियम ३५ को दफा ७ मा बढुवा हुन दुई वटा तालिम गरेको अङ्क जोडिने व्यवस्था छ । कार्यरत पदमा रहँदा गरेको तालिमको अंक एक तह बढुवाका लागि मात्र गणना गरिने व्यवस्थाका राखिँदा असन्तुष्टि बढेको हो । नियमावलीमा तालिमका लागि ७ दशमलव ५ अंक दिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रहरीमा इन्टेलिजेन्स ब्युरो बन्दै
काठमाडौ, वैशाख ७ - राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लैजाने बताइरहेका बेला नेपाल प्रहरीले छुट्टै इन्टेलिजेन्स ब्युरोको तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपुर्ण कडी मानिने इन्टेलिजेन्सलाई नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग मातहतमा ब्युरो बनाएर राख्ने तयारी भएको हो । ब्युरोमा काम गर्ने प्रहरीले सादा पोसाकमा भूमिगतरुपमा काम गर्नेछन् । स्रोतका अनुसार सादा पोसाकमा रहने उनीहरुको कार्यालयसमेत बाहिरै रहन्छन् । 'उनीहरु प्रहरी जस्तो देखिदैनन्,' मुख्यालयका एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'उनीहरुको सही नाम र पहिचान गोप्य रहन्छ ।' प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले संगठनको जिम्मेवारी लिएपछि प्राथमिकतामा राखेको 'इन्टेलिजेन्स लिड पोलिसिङ' अन्तर्गत मुख्यालय र देशभरका १४ अञ्चलमा सादा पोसाकका प्रहरी राख्न लागिएको हो । ब्युरोले संगठित, सामाजिक र सीमामा हुने आपराधिक गतिविधिमाथि निगरानी राख्नेछ । यस्तै सशस्त्र विद्रोह, हतियारधारी समूह, जातीय तथा धार्मिक अतिवादी समूहको गतिविधिमाथि नजर राख्दै नियन्त्रणको काम पनि गर्नेछ । अहि…
गृह सुरक्षामा आर्थिक अपारदर्शिता
गोप्य खर्च कसले कति ? काठमाडौं, वैशाख ६ - गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायमा आर्थिक अपारदर्शिता चरम रहेको देखिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्य (सुराकीलाई प्रदान गरिने) खर्च, आर्थिक सहायता, सामान खरिदबिक्री लगायतमा आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोप्य खर्च कसले कति ? कसले कति ? गृहमन्त्री २०,०००० गृहसचिव १५,४६,००० सशस्त्र प्रहरी प्रमुख २३,५०,००० नेपाल प्रहरी प्रमुख ३७,५०,००० राअवि प्रमुख ७२,९१,००० राअवि, क्षेत्र/जिल्ला १७,०९,००० गृह र मातहतका सुरक्षा निकायको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा खर्च कहाँ गरिएको भन्ने विवरण छैन । गृहमन्त्री, गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक र अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गोप्य काम भएको भन्दै पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड ६८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विविध शीर्षक दिएर खर्च गरिए पनि खर्चको सीमा निर्धारण नगरिँदा भ्रष्टाचार हुने जानकारहरू बत…
अदालतले बढुवाको आदेश दिएका डिआईजिपीको पदावधी सकियो...
हाकिम बिरुद्ध बोलेपछि रमेश खरेल माथी कारबाहीको तया...